nitondra ny heviny manoloana izany ny mpahay lalàna iraisam-pirenena Arlete Ramarson. Nambarany fa fanitsakitsahina ny zon’olombelona, amin’ny maha olona no hataon’izao fitondrana izao. Tsy nisy ny fifampiresahana na fifanatonana tamin’ireo mponina voakasik’ilay tetikasa, ka avy hatrany dia napetraka teny Ambohitrimanjaka ny fitaovana. Saika hanao an-terisetra amin’ny fanotofana tany, ny fitondrana, hoy izy. Eo ihany koa ny tsy fijerena ny tontolo iainana izay mety hitarika any amin’ny tsy fahasalamana. Ny talata lasa teo vao tonga nandamin-dresaka tamin’ny vahoaka teny Ambohitrimanjaka ny iraky ny fiadidian’ny repoblika. Niandry ny savorovoro angamba ireto iraka, vao tonga nandamina, hoy ireo mponina. Mbola mitsipaka ny fananganana io Tana-masoandro atao eny Ambohitrimanjaka io, ny mponina. Nilaza ireto iraka, fa haato vonjimaika aloha ny fananganana io tanàna vaovao io.